पाठ "WIC" मा 96859
अभिभावकसहायता 123 को भ्रमण गर्नुहोस्
कुनै योग्य बेनिफिटहरू - यो आईटम WIC अनुमोदित छ, तर तपाइँ कि त यो वस्तु तोकिएको थिएन वा तपाइँसँग उत्पादन खरीद गर्न पर्याप्त सुविधाहरू बाँकी छैन।
पहिचान गर्न असमर्थ - यसको मतलब अनुप्रयोग बारकोड पढ्न सक्दैन। स्क्यान गर्नुको सट्टा तपाई खानाको बारकोड मुनि रहेको १२-अंकको UPC नम्बर प्रविष्ट गर्न "कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् UPC" बटन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक स्टोरले यो निश्चित गर्नु पर्छ कि ताजा उत्पादन वस्तुहरू स्टोर WIC कोडमा लिंक हुनेछ। यदि स्टोरले कुनै चीजलाई लिंक गर्न सकेन भने, चेक आउट आउटमा WIC फूडको रूपमा स्क्यान हुँदैन। अनुप्रयोगमा ", म यो किन्न सक्दिन!" बटन प्रयोग गरेर हामीलाई थाहा दिनुहोस्। तपाईं पनि हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ wawicfoods@doh.wa.gov.
यदि सम्भव छ भने, आईटमहरूको लागि रसिदको ईमेल चित्रहरू अस्वीकृत गरियो wawicfoods@doh.wa.gov
A: तपाईं आफ्नो WIC क्लिनिक सोध्न वा मा राज्य WIC खाद्य पदार्थ टीम मा प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ wawicfoods@doh.wa.gov.